Heshiisyada Dhacay Saaka:
Kooxda heerka labaad ee Blackburn Rovers ayaa ku dhawaaqday inay Newcastle United kala soo wareegeen ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara Leon Best.
Alex Ferguson ayaa ka cabsi qaba in Porto ay isku daydo inay Manchester United ku riixdo inay ka bixiso in ka badan 25 milyan ginni ciyaaryahan Joao Moutinho, lakiin waxa uu rajeynayaa in u ciyaarista mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn caalamka inay Moutinho ka dhaadhiciso inuu ku qasbo kooxdiisa inay iska iibiso. Sidaasi waxaa qortay The Times.
Wargeyska The Sun ayaa isna qoraya in Man United ay ku dhow dahay saxiixa Joao Moutinho, iyadoo United ay kula soo wareegeyso 25 milyan ginni ka dib markii ay ku badatay lacagta Luka Modric la duldhigay.
Kooxda ku soo laabatay Premier League ee West Ham ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay la soo wareegto halyeeyga khadka dhexe ee Inter Milan Dejan Stankovic iyo xiddiga da’da yar ee Chelsea Romelu Lukaku. Sidaasi waxaa qortay The Times.
Kooxda Blues ayaa sarre u qaaday dadaalka ay ugu jiraan inay la soo wareegaan weeraryahanka kooxda Fiorentina Stevan Jovetic, 22 jirkaan weerarka uga ciyaara Montenegro ayaa dhaliyay 14 gool xilli ciyaareedkii hore. Sidaasi waxaa qortay The Times.
Kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ee Juventus ayaa isku dayaysa inay iibsato weeraryahanka Liverpool Luis Suarez, lakiin milkiilayaasha Reds ayaan dooneynin inay ciyaaryahanka iska iibiyaan. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Liverpool ayaa indhaha ku heysa inay 7 milyan ginni ku dalbato weeraryahanka Newcastle Demba Ba ka hor inta lacagta lagu burburin karo heshiiskiisa kooxda uusan dhicin dhamaadka bisha July. Sidaasi waxaa qortay Daily Mirror.
Halyeeyga reer Portugal Nuno Gomes ayaa la filayaa inuu ku biro kooxda Blackburn ka dib markii uu soo dhamaaday qandaraaskii uu kula jiray kooxda Sporting Braga. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Spurs ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqi doonta in Andrea Villas-Boas uu yahay tababarahooda cusub, iyadoo ciyaartoyda goor horeba loo sii sheegay. AVB ayaa doonaya inuu qeyb ka dhigo heshiiska Luka Modric ee Real Madrid inuu soo qaato Gonzalo Higuain, lakiin Higuain ayaa doonaya inuu u ciyaaro kaliya koox ka ciyaareysa Champions League. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Roberto Mancini� ayaa loo soo bandhigay heshiis cusub oo uu sannadkii ku qaadanayo 5 milyan ginni, islamarkaana kooxda Man City ku sii heynaya ilaa 2016. Sidaasi waxaa qortay Daily Mirror.
Arsene Wenger ayaa wadahadal toos ah la yeelan doona Robin Van Persie maalmaha soo socda, iyadoo lagu kala ogaan doono hadii ciyaaryahanka uu sii joogayo kooxda iyo hadii kale. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Kooxda Gunners ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo goolhayaha xulka France iyo kooxda Lyon Hugo Lloris. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Kooxda Blues ayaa dooneysa inay 4 milyan ginni ku dalbadaan 17 jirka kooxda Southampton uga ciyaara daafaca bidix Luke Shaw. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Tabaraha cusub ee Tottenham ayaa sidoo kale la filayaa inuu 10 milyan ginni ku dalbado ciyaaryahanka aan saldhigan kooxda Chelsea Daniel Sturridge. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Daafaca kooxda AC Milan Thaigo Silva ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu AC Milan kula sii joogayo ilaa shan sanno oo soo socota, taasoo meesha ka saareysa in ciyaaryahanka uu ka tagayo San Siro xagaagan. Sidaasi waxaa qortay Tuttosport.
Tabaraha cusub ee kooxda AS Roma Zeman ayaa ku baaqay in kooxda ay la soo wareegto Michael Bradley halkii ay kala soo wareegi laheyd Clint Dempsey, waxaana heshiiskaas uu haatan ku dhow yahay in la soo gabagabeeyo sida ay qortay Goal.com
Daaficii hore ee kooxda Inter Milan Lucio ayaa la filayaa maanta inuu qalinka ku duugo heshiis labo sanno ah oo uu u saxiixo kooxda Juventus, maalmo yar ka dib markii uu si rasmi ah uga tagay kooxda San Siro ka dhisan. Sidaasi waxaa qortay Corriere dello Sport.
Kooxda Inter Milan ayaa ku dhow inay soo gabagabeyso heshiiska ay kula soo wareegeyso ciyaaryahanka reer Argentina ee kooxda Palermo Matias Silvestre, ka dib markii ay heshiis shaqsi ah la gaareen ciyaaryahanka iyadoo ay harsan tahay kaliya in Palermo iyo Inter ay isafgartaan. Sidaasi waxaa qortay Tuttosport.
Inkastoo Adriano Galliani uu sheegay in boqolkii 100 uu joogayo Ibrahimovic Milan, hadana waxaa laga yaabaa weli inay suuqa soo saaraan si ay u helaan lacag kaash ah oo ay kooxda ku maamulaan. Sidaasi waxaa qortay Goal.com
Kooxda Napoli ayaa diirada saareysa daafaca kooxda Liverpool Martin Skrtel kaasoo la sheegay inuu saaxiibo dhow la yahay xiddiga kooxda Sao Poalo ka dhisan ee Hamsik. Sidaasi waxaa qortay Corriere dello Sport.
Juventus ayaa dhegaha u taageysa Edinson Cavani ka dib markii uu sheegay in hadii ay jirto koox xiiseyneysa inay tahay inay kala hadlaan mustaqbalkiisa kooxda Napoli, hadalkaan ayaa ku soo aadaya maalmo ka hor xilli Cavani uu meesha ka saaray inuu ka tagay Napoli. Sidaasi waxaa qortay Tuttosport.
Ciyaaryahanka xulka Talyaaniga iyo kooxda Palermo Federico Balzaretti ayaa kala go’aansan doona mustaqbalkiisa xagaagan, waxaana daafaca uu kala dooran doonaa kooxdiisa Palermo ama kooxda xiiseyneysa ee reer France Paris Siant-Germain sida ay qortay Corriere dello Sport.
Kooxda Napoli ayaa weli ku adkeysaneysa xiisaha ay u hayaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal ee kooxda Chelsea Raul Meireless. Sida ay qortay Tuttosport.
Xiddiga ay dhawaan soo iibsatay kooxda Barcelona Jordi Alba ayaa maanta la filayaa inuu gaaro Barcelona, islamarkaana berrito uu maro tijaabada caafimaadka, iyadoo khamiista la filayo in loo soo bandhigo saxaafada markii ugu horeysay. Sida ay qortay jariirada Catalan ka soo baxda ee Sport.
Ciyaaryahan Seydou Kieta ayaa lagu sawiray isaga iyo xaaskiisa iyagoo jooga China, waxaana lagu soo waramayaa inuu wadahadal kula jiro kooxda reer China ee Dalian Aerbin, inkastoo madaxa kooxdaas uu meesha ka saaray inay la soo wareegayaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona. Sidaasi waxaa qortay wargeyska Marca.
Dhanka kale wargeyska Barcelona ka soo baxa ee Sport ayaa sheegaya in Kieta laga yaabo in lagu iibsado 1 milyan euro, iyadoo kooxda reer China ay u soo bandhigtay mushahar xad dhaaf ah isagoo saxiixaya ilaa 2014ka.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Sami Khedira ayaa lagu soo waramayaa inuu ka fiirsanayo inuu ku laabto dalkiisa, iyadoo Bayern Munich albaabada u furtay, waxaana laga yaabaa inuu qeyb ka noqdo heshiis la isku bedelanayo isaga iyo Bastian Schweinsteiger Sida ay qortay jariirada AS.
Laacibka da’da yar ee dalka Costa Rica Joel Campbell oo milkayadiisa ay iska leedahay kooxda Arsenal ayaa si amaah ahaan ah ugu biiraya kooxda ka ciyaarta Spain ee Real Betis, heshiiskana waa hal xilli ciyaareed oo amaah ah. Sida ay qortay Marca.
Kooxaha Malaga iyo Espanyol ayaa isku raacay heshiis ay ciyaartoy isdhaafsanayaan, iyadoo Javi Marquez uu ku biirayo kooxda Islanders, halka Sergio Tajera uu u weecanayo dhanka kooxda Catalans. Sidaasi waxaa qortay jariirada Sport.